Njalo oyedwa onentshisekelo ukugembula, ngifuna ithuba ngcono amathuba wakhe wokunqoba. Ngakho-ke, iyiphi umdlali ukholelwa kufanele kube izindlela yokukopela ohlelweni. Ukuthola isixazululo yombuzo "kanjani ukuba bakopele umshini wokugembula" zenzeka njalo. Ulwazi amasu kuchazwe ukunqamulela okhiye, amadivaysi ekhethekile exhunyiwe umshini, nezinye zokukhwabanisa ngokungemthetho ingamaphesenti adluliselwe komunye umdlali kwenye. Kodwa eqinisweni ungakwenza ukukopela umshini wokugembula?
Izindlela ukushaya umshini wokugembula
Njengoba abadlali abanolwazi kanye Wabasaqalayo abanesifiso sokwazi ukuthi ungathola ocebile ngezithukuthuku imishini slot. Abantu abaningi babengabathandi ukuthola ikhambi lale nkinga. Abanye ukhethe indlela okwandisa amathuba lokuwina.
Phakathi izindlela kanjani ukukhohlisa umshini, evame kakhulu esetshenziswa kubhekwa ukudweba yamacebo umdlalo. Ukuze wenze lokhu, kukhona isifundo eside nangokuhlola ngokujulile algorithm we ethile slot machine futhi uthole regularities okwenzeka. Nokho, le ndlela kuyinto isikhathi ukudliwa futhi kuyabiza. Ngaphezu kwalokho, hhayi iqiniso lokuthi ungakwazi ukuqonda logic of the umsebenzi umshini.
Kukhona indlela elula nephumelelayo kanjani ukuba bakopele umshini wokugembula. Ungakwazi Hack isofthiwe yayo. Yiqiniso, akuyona ngempela ukujabulisa, ngaphandle indlela ngokuphelele emthethweni ukuze anqobe. Kodwa uma ukholelwa ukuthi abanikazi "umoya" imishini yabo?
izinhlelo ezikhethekile ukukopela slot machines
Nokho, iningi izimbungulu yokuthengisa firmware noma chips ekhethekile ukukopela. Okokuqala, ngemuva ukubonakala ohlelweni olulandelayo, okuvumela ukuba amathuba of Yokuwina, umenzi umshini inkimbinkimbi algorithm zedivayisi ukuthi inhloso yalokhu ukuvimbela ukukhwabanisa. Futhi okwesibili, ingabe Onjiniyela lezi chips ukuzidayisa ngendibilishi na? Phela, zaziyokwazi yini ukuzuza kakhudlwana uma wena ukukopela slot machines ngosizo kulezi zinhlelo.
Ngaphezu kwalokho, uma lezi zinhlelo ngempela kungaba khulula ukuthenga, abanikazi amakhasino kanye umshini inthanethi ngabe usephumile ungeke uzithole usuwile. Ngiyavuma, umbuzo kanjani ukuba bakopele umshini wokugembula, futhi ukuthi lokhu kungenziwa nhlobo, uvuliwe.
amasevisi Ukungathembeki online, imishini yokudlala
Nakuba zikhona izindlela eziningana ukuwina kumnyama casino, kuyafaneleka eyiphutha main. Vala ukulahlekelwa akuqinisekisi ukuthi esikhathini esizayo ukwazi ukushaya umshini. Ulwazi mayelana le ndlela ikakhulukazi osebenza ku abadlali kokulahlekelwa ngangokunokwenzeka.
On ukudayiswa ukwaziswa okuyimfihlo sendlela ukukopela slot machines online, thina ezichazwe ngenhla, ukuze gxila Siyakukwenza cha. Kuyadingeka ukuthi ukuthi izigebengu abasakaza ulwazi olunje, olulindele abadlali abafuna ukubanika wonke imali.
imishini slot zahlelwa ukunikeza inzuzo ethile, futhi ngaphezu kwalena Iphesenti etholwe isazoqhubeka kungabi. Inhlanhla ezinhle ukuwina slot machines inthanethi azinamphumela. Kuyinto kungalungile ukusho ukuthi amakhono yomuntu umdlali - kakhulu.
Algorithm ukubala inzuzo
Ukuze siphendule lo mbuzo, "kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ukuba bakopele umshini wokugembula", sizodingida isimiso emsebenzini wayo. imishini slot kwimodi inthanethi okwamanje kukhona ethandwa kakhulu phakathi abadlali. Basuke ezikhethekile ze-computer sibe algorithm ezahlukene.
Lezo zinhlelo setha kumaphesenti athile, lapho kufanele lihlale umnikazi casino online. Ezinye izindaba zika-imali umshini wokugembula ukunika abadlali umyalelo okungahleliwe ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, i-software akusho uwine okuzokhishwa nje umshini akuyona ethile ngeke wenziwe.
Kuyinto nalesi sici slot machines yokuthi abasebenzi yekhasino abafaneleki ukudlala sikhungo sabo. Ngakho impendulo kuphela umbuzo kanjani ukuba bakopele umshini wokugembula, imi kanje: kulindeleke ukukhipha ngokugcwalisa yayo imali enkulu ngokwanele imali. Nokho, kungaba uyibize ngokuthi lokukhohlisa. Kunalokho, isu, nakho ezimweni eziningi ingasebenza.
Indlela ukukopela umshini ngokudla
Zikhona izindlela ezihlukahlukene imishini nenkohliso Vending. Nokho, zonke lezi zindlela zisebenze ngempela ngesikhathi kokuzalwa zinsizakuphila kuphela. imishini yesimanje Vending bavikelekile lezi amaqhinga, ngakho imizamo nokugenca kubangele abanikazi smile kuphela.
Kuyaphawuleka ukuthi zonke imishini electronic Vending babe ukuhlolwa amakhodi ngabanye imisebenzi ezisebenzisa opharetha. Lezi amakhodi ngokuvamile eyaziwa kuphela abanikazi zinsizakuphila nabathwali ukuthi ubakhonze. Khetha cipher kungenzeka: njengoba umthetho, izinkinobho ezimbalwa ekhombisa iziphuzo noma imikhiqizo ukudla okuthengiswa umshini. Cindezela kubo ukuba ukulandelana ezithile, ngayinye umshini ngamunye. Mhlawumbe lena kuphela indlela indlela ukukopela umshini nge ukudla, kodwa usebenza hhayi zonke iyunithi.
Kunezinganekwane eziningi ngokuphathelene nendlela ungakwazi fool umshini Vending
Inganekwane yokuqala. Ngokusho indlela esetshenziswa abathandi khulula soda noma efoni kusuka emshinini Vending eSoviet Union. Ukuze uthole ikhofi khulula noma ibha ushokoledi, kubalulekile ukuthatha umthethosivivinywa uhambe bese unamathela it on amakhona emapheshana ingcina tape. Okulandelayo udinga agobe emapheshana ngesigamu siziguqule yilena ehlala ezingutsheni eziqinile. Ngokusebenzisa izihibe, okuyinto thina asamukelanga kubalulekile unamathele induku. Kufakwa ngokuzenzekelayo amanothi bese ubamba Wand. Uma umthethosivivinywa sidlula Enani, ungakwazi ukuyikhipha Wand wakhe bese ukhetha izimpahla ngale mali.
Eyesibili inganekwane. Phonsa in ruble othomathikhi bese uchofoza "imbuyiselo". Lesi senzo kufanele kwenziwe izikhathi eziningana. Khona-ke umshini uzoba ruble, futhi uzokwazi ukukhetha iyiphi into.
Inganekwane yesithathu. Bill kwanoma iyiphi ihlelo unciphe ngesigamu. Ngemva kwalokho kudingeka usike aphume ukwakhiwa iphepha engxenyeni umthethosivivinywa uhambe bese ne- glue ezikhumbeni ngowokuqala yesibili esebenzisa ngethephu enamathelayo. Khona-ke ungakwazi unamathisele emshinini lifundza watermark kuphela engxenyeni yokuqala ka eyiphepha. Ngale ndlela ungagcina isigamu semali.
Ezweni lanamuhla ukuthatha lezi zinkolelo sina, okungenani ngokungazi.
Izindlela imishini ukukopela ngamathoyizi
Ngamunye wethu okungenani kanye ekuphileni bezama ukuthola ithoyizi ezithambile kusuka emshinini Vending. Nokho, lesi simo isikhathi esiningi siye ukuthi umshini isivele athumba ithoyizi futhi sisebenze ekuvuneni, kodwa yena wasala umshini. Lokhu kungenxa yokuthi kuyinqubo ehlelwe ukuba kumaphesenti athile imiklomelo. sekushoneni kwalo umsebenzi kuqinisa izingalo zaso indlela kanye kwenani elithile imidlalo. Ngokwesibonelo, 5-6 umdlalo umshini indlela akukuniki ithoyizi, ngisho noma yambamba ke. Kodwa uma emva inombolo ethile imidlalo izingalo zaso indlela sicindezelwe ngokuqinile umklomelo, futhi uthola.
Kodwa njengoba umshini isiwula nge amathoyizi? You azi ukuthi ukuwina on leli thuluzi, kufanele uchithe isikhathi esiningi. Udinga wakhe kutsi eme eceleni kwakhe futhi ukubala, ngemva eziningi umshini uhamba ukunika umdlali umklomelo. Khona-ke udinga ukufaka umdlalo okwamanje uma umshini has 'ukupha "ithoyizi.
Cishe lena yiyona kuphela indlela indlela ukukopela umshini amathoyizi, kodwa usebenza hhayi kuzo zonke izimo. imishini yesimanje ungenalo njalo nekusebenta isithuthukisi indlela ihambe. Kuzo kuyinto okungahleliwe Ukukhetha imodi noma ukuthi mode, ngakho ukuze akhohlise kubo ngeke zisebenze.
Ingabe kuyazuzisa ke bakopele slot machines?
Ngisho noma ziyaqiniseka icebo labo lwenzuzo emthethweni, ngaphambi kufanele uthole umbuzo enengqondo: "? Ingabe ngisebenzisa ke" Umbuzo ukuthi bakopele umshini wokugembula, yimuphi Gamer nesithakazelo, kodwa uma inzuzo kuwufanele kopek izinkinga kungenzeka nomnikazi lesikhungo, kanti futhi umthetho?
Ukuze andise amathuba wakhe wokunqoba, kutuswa ukudlala esibonelweni esifanayo ukuthi ithuthukiswe kokuhlangenwe nakho kwakhe siqu. Lena indlela kuphela ukuthonya umphumela game. Uma umdlali enqoba emdlalweni may ngamunye. Kungenzeka ukuthi kuyoba kuwe.
Mobius iluphu - imfihlakalo esingapheliyo isikhathi sethu